Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. वार्षिक तीन लाख गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै बच्चा जन्माउँछन् – Emountain TV
काठमाडौं, ३ बैशाख । वार्षिक करिब तीन लाखगर्भवतीले अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थाबाहिरै बच्चा जन्माउने गरेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगविना नै उनीहरूले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिलालाई यातायात खर्च र न्यानो झोला वितरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । महाशाखाका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रममा दाताहरूले सहयोग गरेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती भएको अवस्थामा सरकारले हिमाली भेगका महिलालाई १५ सय र न्यायो झोला, पहाडकालाई हजार र तराईका महिलालाई ५ सय रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । उक्त रकम अपुग भएको डा। केसीले बताए । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि अझै २५ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग देखिएको छ ।
डा गौतमले बेथा लाग्नासाथ अस्पताल लैजानुपर्ने बताए । बच्चाले दिसा खाँदैमा तत्काल मृत्यु नहुनेसमेत उनले बताए । ‘बच्चाले दिशा त्यसै खाँदैन । गर्भवती महिलालाई लामो समयसम्म बेथा लागेको खण्डमा बच्चाले दिसा खाने गर्छ । दिसा खाएको शिशुको फोक्सोमा असर गरी श्वासप्रश्वास बन्द हुन जान्छ । जसले गर्दा शिशुको जन्मनासाथ मृत्यु हुन्छ । गर्भवती महिलामा उच्च रक्तचाप भएमा, आमाको पेटमा बच्चा बढ्न नसकेमा, आमाको दिसा पेटभित्रै शिशुले खाने गर्छ,’ उनले भने । उनले शिशुको मृत्युमा उपकरणको कुनै हात नरहने स्पष्ट पारे ।
कर्मचारी अभाव पूर्ति गर्न लाग्छु स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
सरकारले प्रतिवर्ष ७ लाख ५८ हजार ६ सय ५२ जना महिला गर्भवती हुने अनुमान गरेको छ । यसमध्ये करिब १० प्रतिशतको संख्यामा गर्भपतन गराउने वा गर्भ तुहेर जानेजस्ता समस्या हुने गरेको छ । ०७२ / ७३ मा जम्मा ६ लाख १६ हजार १ सय ४५ जना महिला गर्भवती भएका थिए । जसमा स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसँग सुत्केरी हुने ३ लाख ४१ हजार २ सय ३९ थिए । स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा ३२ हजार २ सय ४७ जना घरमै सुत्केरी भएका थिए । बाँकी केही खेर गएको र धेरै स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी भएको अनुमान छ ।
आज सुरक्षित मातृत्व दिवस यस्तो छ अवस्था
०७२/ ०७३ मा जम्मा ६ लाख १६ हजार १ सय ४५ महिला गर्भवती भएका थिए । जसमा स्वास्थ्य संस्थामा गइ तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी संग सुत्केरी हुने ३ लाख ४१ हजार २ सय ३९ थिए । स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा घरमा ३२ हजार २ सय ४७ जना गरी जम्मा ३ लाख ७३ हजार ४ सय ८६ सुत्केरी भएका थिए । बाँकी केही खेर गएको र धेरै स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी भएको सरकारको अनुमान छ ।
०७१/ ०७२ मा जम्मा ६ लाख ५ हजार २ सय ७० जना महिला गर्भवती भएका थिए । जसमा स्वास्थ्य संस्थामा गइ तालिम प्राप्त लक्ष्य स्वास्थ्यकर्मी संग सुत्केरी हुने ३ लाख १ हजार ३१ थिए । स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा घरमै ५२ हजार ९ सय ६६ सुत्केरी भएका थिए । जसमा ४ सय ४४ जना आमाको मृत्यु भएको थियो । बच्चा जन्मेको २८ दिन भित्र २ हजार ४ सय ३७ शिशुको मृत्यु भएको थियो भने ४ हजार २८ शिशुको जन्मदै मृत्यु भएको थियो ।
गर्भवती भएको अवस्थामा सम्बन्धित महिलाले कम्तीमा चारपटक आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ । प्रसूति हुन समयमै स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नभएका कारण महिला आफैँ सचेत भएर स्वास्थ्य संस्थामा गएमा राम्रोसँग बच्चा जन्मिन्छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीका अनुसार गर्भवती महिला सामान्य बेथा लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था जाँदैनन् । बेथाले च्यापेर समस्या देखिन थालेपछि मात्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन जानेको संख्या धेरै छ । त्यस्तो अवस्थामा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले सुरुमा भर्ना लिने र अन्तिम अवस्थामा रिफर गर्ने कारण पनि आमा र शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।